OK ကို Kahramanmaras Osmaniye Access ကိုလမ်းမ - rayhab ဖြစ်ပါသည်
Homeတူရကီမြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး46 KahramanmarasOK ကို Kahramanmaras Osmaniye Access ကိုလမ်းမ
11 / 09 / 2019 Levent Elmastaş 46 Kahramanmaras, မြေထဲပင်လယ်ဒေသကြီး, အထွေထွေ, လမ်းမကြီး, တူရကီ 0
အဆင်ပြေ KahramanMaras osmaniye ဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကို
မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေး Osmaniye နှင့်Kahramanmaraşဆက်သွယ်ထားသောကားလမ်းပေါ်တွင်အလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံဖို့တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Yesilova ရပ်ကွက်အတွင်းနေထိုင်သူများ Hayrettin Güngörအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
Andirin Yesilova နှင့်အတူ Kahramanmaras, Osmaniye Kadirli ခရိုင်၏မြူနီစီပယ်သွေးလွှတ်ကြောချိတ်ဆက်ပေါ်တွင်အလုပ်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ဒေသဆိုင်ရာသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကတ္တရာနှင့်လိုင်းအလုပ်အဘို့ကြီးသောအရေးပါမှု၏လမ်းကြောင်းသည်အောက်ပါ ပို. ပင်လှပသောမြင်ကွင်းကိုဖြစ်လာသည်။ မီတာအရှည်နှင့်မီတာလမ်းအတွက် 20 တထောင်သူတို့ကအလုပ်၏ကြားဖူးဖျောနေထိုင်သူများ၏အကြီးမားဆုံးသောစိတ်ကျေနပ်မှုပြီးစီးခဲ့သည်မြို့တော်မြို့တော်ဝန် Hayrettin Güngörအားကျေးဇူးတင်ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
အခမဲ့သံ Andirin Yeşilovaခရိုင်အကြီးအကဲ, Hayrettin ကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းနှင့်အတူ "Gungor ခြင်းဖြင့်ပြေလည်ကြောင်း Osmaniye Kadirli အကြားလမ်းမဖော်ပြထားနှစ်ပေါင်းများစွာကြုံတွေ့ပြဿနာတွေ၏မြို့တော်မြို့တော်ဝန်, ငါတို့အကြီးအအခက်အခဲများရှိခြင်းခဲ့ကြသည်။ ညာဘက်တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Hayrettin Gungor ကျွန်တော်တို့ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင့်လမ်းမကြီးဖြေရှင်းနိုင်ပါတယ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်ပူကတ္တရာဖြစ်လာပြီ Get ။ ငါမစ္စတာနိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့်အဖွဲ့သည်အလုပ်ကိုကျေးဇူးတင်ချင်ပါတယ် "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Yeşilovaနေထိုင်သူများထံမှရပ်ကွက်အတွင်းအီဘရာဟင်Karcı "တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ရွေးကောက်ပွဲမတိုင်မီကျွန်တော်တို့ရဲ့အိမ်နီးနားချင်းကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံတော်သမ္မတသွားရောက်လည်ပတ်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းအကြောင်းကိုသူ့ကိုကြှနျတျောတို့၏တောင်းဆိုချက်ကိုစေလွှတ်ခဲ့သည်။ ဥက္ကဋ္ဌပြဿနာကိုပြေလည်မည်ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သည်။ ချီးမွမ်းခြင်းကိုယနေ့နှင့်ကျွန်တော်တစ်ဦးကြီးမားတဲ့ပြဿနာဖယ်ရှားပစ်ရကျွန်တော်တို့ရဲ့လမ်းဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ မစ္စတာမြို့တော်မြို့တော်ဝန် Hayrettin Güngörနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်သိပ္ပံရေးရာအဖွဲ့ကကျေးဇူးတင်, "ဟု၎င်းကပြောသည်။
Osmaniye, Kahramanmaras နှင့် Gaziantep စာရင်းစစ်မီးရထားလမ်းဖျော်ဖြေခဲ့သည် 12 / 12 / 2014 Osmaniye, Kahramanmaras နှင့် Gaziantep စာရင်းစစ်မီးရထားလမ်းလုပ်ဆောင်: Osmaniye, Kahramanmaras နှင့် Gaziantep လိုင်းစစ်ဆေးခြင်းထွက်သယ်ဆောင်ခဲ့သည်အင်ဂျင်နီယာများနှင့်ဆက်စပ်န်ထမ်းများကလိုက်ပါသွား of Service ကိုဒါရိုက်တာကသဘာပတိအဖြစ်ဆောင်ရွက်ဒါရိုက်တာ Mustafa Çopurကော်မတီ, xnumx.bölg။ လမ်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုလုပ်သားတွေရဲ့လမ်းဆောက်လုပ်ရေးအလုပ်အလုပ်လုပ်ကိုင်ရာလေ့လာတွေ့ရှိရှိရာအမှတ်မှာမီးရထားအနေဖြင့်လိုင်းစက်လုပ်သမားလေ့လာတွေ့ရှိချက်ဒေသဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ Mustafa Çopurတစ်လျှောက်တွင်လမ်းနှင့်ယာဉ်အသွားအလာအခြေအနေများနှင့်အတူဆင်းလိုက်ပါသွား။ Mustafa ÇOPURပြည်နယ်၏မျက်နှာကို ထောက်. မေးမြန်းခြင်းနှင့်အလုပ်သမားများကသူတို့ရဲ့အတွေးအခေါ်များနှင့်အကြံပြုချက်များမှနားထောင်ခဲ့တယ်။ Turner အစီအစဉ်အားဖြင့်ဖုံးလွှမ်းဘူတာသွားရောက်ခဲ့ပြီးနှင့်အလုပ်၏6နှစ်အတွင်းကြည့်ရှုအားပေးလျက်ရှိသည်။ အစောပိုင်းနံနက်အလင်းFevzipaşaအတွက် Adana, သလဲသီး, Gaziantep ထံမှ ထွက်. ...
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Adana- İmamoğlu- Kozan- Kadirli-Osmaniye ရထား Link ကိုစစ်တမ်းစီမံကိန်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး 23 / 05 / 2017 STATE ရထားလမ်း Administration (TCDD) ADANA6၏İmamoğlu- Kozan- Kadirli-Adana-Osmaniye ရထား Link ကိုစစ်တမ်းစီမံကိန်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသမ္မတနိုင်ငံအထွေထွေဒါရိုက်တာ။ ဒေသန္တရရုံး, အကြံပေးန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဝယ်ယူရေးအဘို့အİmamoğlu- Kozan- Kadirli-Adana-Osmaniye ရထား Link ကိုစစ်တမ်းစီမံကိန်းနှင့် Consultancy Services မှဖြန့်ဖြူးကိုယ်စားလှယ်လောင်းများလေလံဆွဲရန် prequalification လျှောက်ထားရန်ဖိတ်ခေါ်နေကြသည်အလုံအလောက်အတွေ့အကြုံကိုရှိပါတယ်။ အဆိုပါစာကျွမ်းကျင်မှုအတိုစာရင်း pre-အရည်အချင်းများအကဲဖြတ်ရလဒ်များကိုအခြေပြုလေလံ၏ပါဝင်မှုနှင့်အတူ 4734 မှလေလံတွေ့ရှိသောသူတို့အားအနေဖြင့် Pre-qualification သတ်မှတ်ချက်များအတွက်သတ်မှတ်ထားသောစံနှုန်းများနှင့်အညီလူကြိုက်များနေဖြင့်5ကြိမ်မြောက်ဇာတ်လမ်းတွဲ၏ပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီဥပဒေအမှတ်အချို့သောလေလံရန်ဖိတ်ခေါ်လိမ့်မည် ...
မြေပြိုမှုဆန့်ကျင် Osmaniye တောင်ပိုင်း beltway ့အစီအမံ 16 / 10 / 2014 အဆိုပါဆောင်ရွက်မှုများဆန့်ကျင် Osmaniye တောင်ပိုင်း beltway 's အပြတ်အသတ်: ကြောင့်တောင်ပိုင်း Ring ကိုလမ်းမများတွင်ဖြစ်ပေါ်မြေပြိုမှုမှပြိုကျအန္တရာယ် Osmaniye အတွက်ယူဆောင်ရွက်မှုများသည်ပြုပြင်အလုပ်စတင်ခဲ့ပါတယ်။ တချို့လမ်းပျက်ကျဖြစ်ပွားခဲ့သည်နေချိန်မှာရွာသွန်းခြင်းနှင့်ရေကြီးမှုအများအပြားနေအိမ်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်ဖြစ်ပေါ်ရှေ့တော်၌ထိုရေ၌အကြောင်းကို 15 ရက်, ပျက်စီးခဲ့ကြပြီးနောက်။ ကြောင့် Karachay-မီးတောင်ဖြစ်ပွားခဲ့သည်စီးအိပ်ရာဖြတ်သန်းလွှမ်းမိုးသောရေတောင်ပိုင်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပျက်စီးခြင်းဆီသို့ဦးတည်။ ကြောင့်အမြင့်အတွက်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်5မီတာမြေပြိုဖို့, လမ်း၏ညာဘက်ခြမ်းအပေါ်သံအတားအဆီး၏ခြေမဝေမျှမှုကြောင့်ပြိုကျမှလေထုထဲတွင်ဆိုင်းငံ့ဖြစ်လာခဲ့သည်။ အဝေးပြေးလမ်းမကြီးအဖွဲ့များ, လုပ်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးတလမ်းတည်းဖြင့် marking သည်မြေဆီလွှာယိုဖိတ်မှု ...
non-အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ connection ကိုလက်ျာဘက်ပြားချပ်ချပ်ဖန် 29 / 04 / 2014 ပြီးပြည့်စုံသောအဝေးပြေးလမ်းမကြီးပြားချပ်ချပ်ဖန်ရန်မကွန်နက်ရှင်: MÜSIADDüzceဌာနခွဲကသမ္မတအစ္စမေးလ် Cakmak non-အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ကွန်နက်ရှင်Düzceဝန်ကြီး Lutfi Elvan လွန်ခံခဲ့ရသည်။ MUSIAD MUSIAD Elazig ဌာနခွဲအိမ်တွင်ကျင်းပခဲ့သည်MÜSIADDüzceဘဏ်ခွဲ, အုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအစည်းအဝေးတွင် xnumx.genel ကျယ်ပြန့်ပါဝင်မှုသည်။ ပို့ဆောင်ရေး, ရေကြောင်းရေးရာနှင့်ဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီး Lutfi Elvan ရဲ့ဌာနခှဲကအကြီးအကဲများအစည်းအဝေးပြည်နယ်အတွင်းရှိဓမ်မအမှု၏တရားစီရင်ပိုင်ခွင့်အတွင်းပါရှိသောကိစ္စရပ်များနှင့် ပတ်သက်. ၎င်းတို့၏ဆန္ဒကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုတက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့Düzceသာလမ်းကပံ့ပိုးသည်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏အစည်းအဝေးတွင် MUSIAD နိုင်ငံတော်သမ္မတDüzceဌာနခွဲအစ္စမေးလ် Cakmak "Düzceကျွန်ုပ်တို့၏ဗဟိုလမ်းမကြီးကွန်နက်ရှင်တစ်ခုတည်းသောပြည်နယ်မဟုတ်ပါဘူးDüzceစင်တာ - ။ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့မြူနီစီပယ်နှင့်အတူအဝေးပြေးလမ်းမကြီးကွန်နက်ရှင် 85 ဒီဆောက်လုပ်ရေးနှင့်ပတ်သက်သည့် ...
ဖွင့်လှစ်တောင် Ring ကိုလမ်းမ link ကိုလမ်းနှင့်အတူ Tofas Elaziğလမ်းဆုံ 09 / 12 / 2014 အဆိုပါ access ကိုလမ်းနှင့်အတူElaziğတောင်ပိုင်း Ring ကိုလမ်းမကြီးလမ်းဆုံတောင်ပိုင်း Ring ကိုလမ်း Tofas Elazig မြူနီစီပယ်လမ်းလင့်များ၏ Tofas လမ်းဆုံခြင်းဖြင့်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဖြစ်သတင်းပို့ခဲ့သည်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ မြှို့နယ်ကနေရေးသားထားသောကြေညာချက်အရ, အသွားအလာ၏စီးဆင်းမှုကိုဖြေလျှော့နိုင်ရန်အတွက်တောင်ပိုင်း Ring ကိုလမ်းမ Interchange ၏ဆောက်လုပ်ရေး Tofas link ကိုလမ်းပြီးစီးခဲ့ပါသည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်အတူဖွင့်လှစ်စတင်ခဲ့သည်။ မြို့ပြယာဉ်ကြောတောင်ပိုင်း Ring ကိုလမ်းမဆက်သွယ်မယ့်ဝန်ဆောင်မှုလမ်းပေါ်ကိုဖွင့်လှစ်ကြောင်းဖော်ပြထားသက်သာရာနိုင်ရန်အတွက်၎င်းတို့၏အလုပ်၏အခြေအနေတွင်မမှားယွင်း Elazig မြို့တော်ဝန်မူဂျာဟစ်, ဆီသို့ဦးတည်စုံစမ်းစစ်ဆေးတှငျတှေ့နယူး link ကို။ မြို့ပြယာဉ်ကြောမှသက်သာရာရစေရန်အလို့ငှာတောင်ပိုင်း Ring ကိုလမ်း, မှားယှငျးနိုငျလွှဲပြောင်းအသစ်တစ်ခုဆက်သွယ်မှုလမ်းကြောင်းကိုစေဆက်လက်လုပ်ဆောင်ပါလိမ့်မယ် ...
Kahramanmaras Osmaniye Access ကိုလမ်းမ
Osmaniye, Kahramanmaras နှင့် Gaziantep စာရင်းစစ်မီးရထားလမ်းဖျော်ဖြေခဲ့သည်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Adana- İmamoğlu- Kozan- Kadirli-Osmaniye ရထား Link ကိုစစ်တမ်းစီမံကိန်းနှင့်အတိုင်ပင်ခံန်ဆောင်မှုများဝယ်ယူရေး
non-အဝေးပြေးလမ်းမှာဖြစ်တယ်လို့ connection ကိုလက်ျာဘက်ပြားချပ်ချပ်ဖန်
ဖွင့်လှစ်တောင် Ring ကိုလမ်းမ link ကိုလမ်းနှင့်အတူ Tofas Elaziğလမ်းဆုံ
Baslanti Patch လမ်းမကြီးလုပ်ငန်းခွင်မှ Akcakoca, Ring ကိုလမ်းနှင့်ကျေးရွာလမ်းမကြီးစတင်
Osmaniye မြူနီစီပယ်အဆိုပါရေယာဉ်စုငါးခုနယူး Tools များပါတီဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်
ပစ္စည်းဝယ်ယူရေးသတိပြုပါ: Osmanabad နှင့် Iskenderun Gara အတွက်ရှိပြီးသားİhata၏ကန်ထရိုက်ဆေးတစ်လက်အလုပ်ဖြစ်တယ်